Aragti gaabnida professor Cabdi Ismaciil Samater? – hogaanka.org
Mararka qaarkod ayaa aad is odhanaysaa Dadka Waxbartey ee Somaliyeed waxay ku wanaagsan yihiin Amuska. Waayo had iyo jeer marka arin laga hadlayo waxaa moodaa in aaney qaab xogogaalnimo ama si fahanka guud ee arimaha laga hadlayo Baal marsan ay aragtidooda u dhiibtaan.Iyada oo ay tahay in qaab cilmiyeed oo aan ka fogey xaqiiqada iney ugu sharaaxaan umada ayey mar walba ku saleeyaan rabitaankooda siyaasadeed oo aan xidhiidh la lahayn waxa laga hadlayo taasina waa mida ay horumar la gaadhi la yihiin.
sida aan u arko professor Cabdi Ismaciil wuxuu ka warwareegayaa in June tilmaamo cida khaladka leh tahayna in runta loo sheego Sida runtu tahay waxaa u cuskanayaa qodobadan:
1- Deegaankii uu ka soojeeday ee gobalada Gabiley iyo Awdal waxaa dadkii ku noolaa ku jiraan xaalad adag oo masiibo dabiiciya ayey la tacaalaayaan isaguna dagaalada somaliya ku soo qaadey Somaliland ayuu qiil u sameenayaa ,halka ehelkiisii u baahan yihiin gurmad iyo samato bixin ayaanu xitaa soo hadal qaadin dhibta haysata ileyn hala caawiyona waa Dane.
2- wuxuu si jeesjeesa uga Hadley dagaalka Somaliya ku soo qaadey Somaliland oo dhinac degaanadeedii duufanadu ku dhufteen ee uu ka soo jeeday u gurmanaya dhibaatooyinka ka taagan ee duufanadu wax yeeleeyeen dhinacna is ka difacaysa Somaliya oo aan rabin in dadkaa reer Awdal iyoSaleel aan la caawin oo ay dawada Somaliland ku mushqusho dagaalada lagu soo qaadey.
Sideedaba dhibaatada aqoonta dadka Somaliyeed ee lagu tuhmayo waa kuwa ugu liita ee ka gaabiyey kaalintii dadkoodu iyo dalkoodu uga baahnaa. Nin dadkiisa oo loo gurmanaya oo dhibaateysan ka diiri waayey ma dagaal dawlad kibirtey ee Somaliya ku muujinayo in aaney wax naxariisa u haynin dadka Somaliland ee duruufaha duufanada la dhaala dhacaysa waa taariikh xumada xukumada federalka ee Somaliya iyo madaxweyne farmaajo oo maraya jidkii Dawladii Siyaad Bare iyo moorgan oo garoowe u yimi sidii caruurtii somaliyeed iyo Somaliland ee abayaashod iyo hooyooyinkood ku xasuuqay Guud ahaan degaanada somalidu degto.
SOMALIYA OO WEERARO QORSHEYSAN KU SOO QAADAY QARANKA SOMALILAND Previous